Sawirro Cusub: Khasaaraha ka dhashay qaraxyadii Hoteel Wehliye oo kordhay - Caasimada Online
Home Warar Sawirro Cusub: Khasaaraha ka dhashay qaraxyadii Hoteel Wehliye oo kordhay
Sawirro Cusub: Khasaaraha ka dhashay qaraxyadii Hoteel Wehliye oo kordhay
Muqdisho (Caasimada Online) – Weerar ismiidaamin ah ayaa goor dhaw ka dhacay Irida Hotelka Wehliye ee Magaalada Muqdisho, kadib markii gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay weerarka lagu fuliyay.
Weerarka ayaa waxaa ka dhashay Khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray Illaalada Hotelka iyo dad kale oo meesha ku sugnaa.
Hotelka Wehliye waxaa ku dhagan maqaayad dadka ay ka cunteeyaan, halkaasi Khasaare ayaa laga soo sheegayaa inuu ka dhashay.
Weerarka ayaa lala damacsanaa Wasiirka Kaluumeysiga KMG ee DFS Mr ceemoy oo xiligaasi uu gaarigiisa ka dhaqaaqay Hoteelka, inkastoo Wasiirka uu ka dagay gaariga waxyar ka hor inta uusan weerarka dhicin.
Ilaalada Wasiirka iyo Darawalkiisa ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerarka, halka uu isagana ka badbaaday.
Khasaaraha ka dhashay weerarka ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen ilaa 11 ruux oo qaarkood u dhintay dhaawac looga qaaday goobta.
Dhaawaca ayaa la sheegayaa inuu kor u dhaafaayo 14 sida laga soo xigtay Saraakiisha amaanka DFS ee goobta gaaray dadka dhaawacmay iyo kuwa dhintay ayaa badankooda ku sugnaa maqaayado lagu shaaho oo kasoo horjeeda Hoteelka.